तपाईंको यो साता कस्तो छ ? हेर्नुस् यो साताको राशिफल - Candles Khabar
गृहपृष्ठ तपाईंको यो साता कस्तो छ ? हेर्नुस् यो साताको राशिफल
ग्रहगोचरमा तपाईको यो साता कस्तो रहनेछ ? यो साता के कस्ता कार्यका निम्ति लाभदायी रहनेछ ? यसैगरीआर्थिक उन्नति, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, विदेश यात्रा, व्यापार व्यवसाय, आदि समग्र पक्षको ग्रहगोचरीय विश्लेषण सहित साप्ताहिक राशिफल आजको प्रस्तुतिमा रहनेछ ।
मेष राशिः कर्मक्षेत्र– यो साता फलदायी रहनेछ । कर्मक्षेत्र उन्नत देखिन्छ । प्राविधिक कार्य व्यवसाय हुनेका निम्त साता फलदायी रहनेछ । बौद्धिक क्षेत्र पनि यो साता उन्नत नै रहनेछ । आर्थिक दृष्टिले साताको पूर्वाद्र्ध उन्नत देखिन्छ । लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन् । सेयर व्यवसाय पनि उन्नत रहनेछ । धनभावमा राहुको निवासले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । बिही र शुक्रवारको समय खर्चिले रहनसक्नेछ । उक्त दिन लेनदेनका कार्यमा सजग रहनु नै उचित हुनेछ । धातुजन्य वस्तुको व्यापार व्यवसाय फलिभूत रहने देखिन्छ । विद्याको भाव उन्नत नै देखिनछ । खोज अनुसन्धानका कार्यमा अधिक संलग्नता बढ्ने देखिन्छ । सृजनात्मक पक्ष मध्यम रहनेछ । सांगीतिक क्षेत्र लाभदायी नै रहनेछ । वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन् । धार्मिक एवं आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहनेछ । प्राकृतिक परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन् । पे्रम पक्ष पनि यो साता उन्नत नै देखिन्छ । सम्बन्धमा प्रगाता थपिनेछ । पारिवारिक पक्ष सबल नै देखिन्छ । स्वास्थ्यको भाव मध्यम रहनेछ । खानपानमा सजग रहनु नै उचित हुने साताको राशिफल रहेको छ ।
वृष राशिः वृष राशिका लागि यो साता अर्थदायी रहनेछ । साताको अधिकांश समय चन्द्मा अनुकुल रहनेछन् । जसले कार्यक्षेत्रमा उन्नति दिलाउने देखिन्छ । मनपक्ष यो साता सबल रहनेछ । नयाँ कार्य प्राप्तिका अवसर पनि मिल्नेछन् । आर्थिक दृष्टिले पनि साता सुखद् नै रहनेछ । लग्नभावमा राहुको निवास रहेकाले लगानीका कार्यमा भने बुद्धिपषको प्रयोग यो साता सुखद् रहनेछ । सेयर व्यवसायीका निम्त साताको पूर्वाद्र्ध सुखद् रहनेछ । व्यवापार व्यवसाय उन्नत नै रहने देखिन्छ । प्रेम पक्ष यो साता सबल देखिन्छ । नायँ प्राकृतिक परिभ्रमणले प्रेम सम्बन्धमा प्रगाढता थप्नेछ । पारिवारिक पक्ष पनि सुखद् देखिन्छ । इष्टजनको साथ सहयोग मिल्नुका सौ दाम्पत्य सुखका योग पनि देखिन्छन् । विद्याको भाव सबल देखिन्छ । विशेषतः कला एवं वाणिज्य क्षेत्रको अध्ययन गर्नेका निम्ति साता सुखद् रहनेछ । सांगीतिक क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन् । सृजनात्मक क्षेत्रमा अधिक संलग्नता रहने देखिन्छ । खेल क्षेत्र पनि रुचिकर नै रहनेछ । अध्यात्म चिन्तनमा पनि केही समय व्यतीत् हुनेछ । स्वास्थ्यको भाव मध्यम देखिन्छ । वैदेशिकक्षेत्रबाट लाभ रहनेछ । राजनीतिक कर्मीका निम्ति सुखद् नै देखिन्छ । शनिवारको समय भने संघर्षदायी रहनसक्ने साताको राशिफल रहेको छ ।
मिथुन राशिः मिथुन राशिका लागि साता मिश्रित फलदायी रहनेछ । सोमवारसम्म ग्रह प्रतिकूल देखिन्छन् । जसले कार्यक्षेत्रमा संघर्षका साथै खर्चमा पनि वृद्धि हुनसकने देखिन्छ । मंगलवारपछिका सामय भने सुखद् रहनेछन् । अािर्थक दृष्टिले साताको उत्तराद्र्ध सुखद् रहनेछ । सेयर व्यवसायीका निम्ति पनि मंगलवारबाट लाभप्रद समय देखिन्छ । व्यवापार व्यवसायमा जलीय वस्तुबाट लाभ रहने देखिन्छ । वस्त्र, कागजी मुलायम वस्तुका साथै औषधीजन्य व्यवसाय यो साता फलिभूत रहनेछ । विद्याको मध्यम फलदायी रहनेछ । कलात्मक पक्षको अध्ययन अध्यापन यो साता सुखद् रहनेछ । सृजनात्मक पक्ष मंगल र बुधवार सबल रहनेछ । सांगीतिक क्षत्रबाट लाभका योग देखिन्छन् । मित्र पक्ष सबल रहनेछन् । पारिवारिक सुखका साथै प्रेम प्रणय पनि यो साता फलिभूत रहनेछ । धार्मिक आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहने देखिन्छ । वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन् । कार्यप्राप्तिका साथै सुखद् परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन् । राजनीतिक दृष्टिले साताको उत्तराद्र्ध प्रभावकारी रहने देखिन्छ । निर्णय प्रक्रियामा अडिग रहनु नै उचित हुनेछ । खेलकाो क्षेत्र पनि यो साता सुखद् रहने देखिन्छ । स्वाथ्यका दृष्टिले सोमवारसम्मको समय कष्टदायी रहनसक्नेछ । शीतजन्य वस्तुबाट सजग रहनु नै उचित हुने साताको राशिफल रहेको छ ।
कर्कट रािश : कर्कट राशिका लागि साता लाभदायी रहनेछ । कर्मषेत्र बलवान् देखिन्छ । प्राविवधिक कार्यक्षेत्र हुनेका निम्त साता सबल देखिन्छ । साहसिक कार्यम मन प्रवृत्त रहनेछ । प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्न ेदेखिन्छ । आर्थिक दृष्टि साता सुखद् नै रहनेछ । धातुजन्य वस्तुको व्यवसाय उन्नत रहने देखिन्छ । अग्निकार वस्तुबाट लाभ रहनेछ । मंगल र बुधवारको समयमा भने खर्चमा वृद्धि हुनसक्ने दखिन्छ । उक्त दिन बाहेकको समय सेयर व्यवसायीका निमत पनि सुखद् रहनेछ । कृषि व्यवसायीका निम्त पशु चौपायबाट लाभ रहनेछ । विद्याको क्षेत्र– मध्यमफलदायी रहनेछ । विद्याचभावमा केतुको निवास रहेको छ । ज्ञानका क्षेत्रमा अधिक परिश्रम गर्नुपर्ने योग बनाएको छ । कलात्मक पक्षको अध्ययन सुखद् रहनेछ । कला मनोरञ्जनको पक्ष उन्नत देखिन्छ । प्रेममा पारख बढ्नुका साथै सुखद् परिभ्रमणका अवसर पनि प्रापत हुनेछन् । वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग रहेका छन् । स्वास्थ्यको दृष्टिले यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ । पारिवारिक पक्ष सुखद् नै देखिन्छ । मंगल र बुधवारभने कार्यमा व्यवस्तता रहनुका साथै अधिक परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ । तत् तत् समयमा आहार विहारमा सजग रहनु उचित हुने साताको राशिफल रहेको छ ।
सिंह राशिः सिंह राशिका लागि यो साता सुखद् रहनेछ । व्यवसायमा वृद्धिका साथै लगानीका नयाँ मार्ग प्पात् हुनेछन् । कार्यक्षेत्रमा संघर्षदायी रहे पनि उचित प्रतिफल भने प्रापत हुने देखिन्छ । नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि हुनेछ । आर्थिक दृष्टिले साता सबल रहनेछ । बिही र शुक्रवारका समयमा भने खचृमा वृद्धि हुनसक्नेछ । अन्य समय सुखद् नै देखिन्छ । धातुजन्य वस्तुको व्यवापार यो साता फलदयाी रहनेछ । सेयर एवं वैैकिङ क्षेत्र पनि यो साता उन्नत नै देखिन्छ । कृषि व्यवसयीका निम्ति फलफूल एवं तरकारी जन्य वस्तुबाट लाभ रहनेछ । विद्याको क्षेत्र उन्नत रहनेछ । कलात्मक पक्ष सबल रहनेछ । शुक्रको प्भावले सृजनात्मक पक्षमा चाख बढाउनेछन् । खेलको क्षेत्र मध्यमफलदयाी रहनेछ । राजनीतिकमीृका निमत साता संघर्षदायी रहनसक्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यको हिसाबले यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ । आफन्तजनको साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ । प्रेमको भाव सुखद् रहनेछ । सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन् । बिही र शुक्रवार लेनदेनका साथै खानपिनमा विशेष ध्यान दिनु उचित हुनेछ । लगानीका कार्यमा पनि तत् दिन अग्रसर नरहनु नै उचित हुनेछ । धार्मिक आध्यात्मि कार्यमा संलग्नता रहनसक्ने साताको राशिफल रहेको छ ।
कन्या राशिः कन्या राशिका लागि साता उन्नतिदायी रहनेछ । धनको क्षेत्र सबल देखिन्छ । आर्थिक लाभका साथै नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त हुनेछ । आर्थिक दृष्टिले साता सुखद् रहनेछ । लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्तिका साथै शेयर व्यवसायबा पनि लाभका योग देखिन्छन् । कार्यक्षेत्र सबल रहनेछ । भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथै सुखद् परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन् । विद्याको भाव सफल देखिन्छ । प्राज्ञिक कार्यमा अधिक संलग्नता रहनेछ । विशेषगरी प्राविधिक क्षेत्रका अध्ययन अधयपन गर्नेका निम्त साता सुखद् रहनेछ । काला साहित्य एवं मनोरञ्जनको क्षेत्र यो साता मध्यमफलदायी रहनेछ । पारिवारिक सुखका योग देखिन्छन् । खेल क्षेत्रबबाट लाभ रहनुका साथै सुखद् परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन् । प्रेम प्रणका दृष्टिले साता सुखमय रहनेछ । गुह्य कुराको आदान प्रदानले प्रम पक्ष मौलाउने देखिन्छ । पराक्रम भाव पनि सबल रहेकाले राजनीतिको क्षेत्र यो साता सुखद् रहनेछ । वैदेशिक क्षेत्र पनि उन्नतिदायी रहन देखिन्छ । स्वास्थ्यको भाव सबल रहनेछ । अस्त्र शस्त्रका साथै अग्निजन्य वसतुबाट भने सजग रहनु नै उचित हुने साताको राशिफल रहेको छ ।
तुला राशिः तुला राशिका लागि साताको उत्तराद्र्ध विशेष फलदायी रहनेछ । सोमवारसम्म ग्रहबल केही प्रतिकूल देखिन्छन् । जसले कार्यक्षेत्रमा संघर्षका साथै खर्चमा पनि वृद्धि गराउनसक्ने देखिन्छ । शत्रुपक्षबाट सजग रहनु नै उचित हुनेछ । मंगलवारपछिको समय सुखद् बन्दै जानेछ । आय आर्जनका स्रोत क्रमशः बढ्दै जानेछन् । नयाँ कार्य प्राप्तिका अवसर पनि मिल्नेछन् । मित्र पक्ष सबल देखिन्छन् । नेतृत्व क्षमतामा वृद्धिका साथै प्रशासनिक पक्ष लाभदायी रहनेछ । आर्थिक दृष्टिले पनि साताको उत्तराद्र्ध उन्नत रहनेछ । व्यवसायमा क्रमशः वृद्धिका योग देखिन्छन् । सेयरको लगानी प्रतिफलदायी बन्नेछ । पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै प्रेम जीवन पनि सुखद् रहनेछ । सम्बन्धका नयाँ आयाम थपिनेछन् । विद्याको भाव सफल रहनेछ । प्राविधिक विषयको अध्ययन कर्ताका निम्त साता सुखद् रहनेछ । कला साहित्यको क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ । सांगीतिक पक्ष मंगलवारपछि सुखद् रहनेछ । वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ योग देखिन्छन् । खेल क्षेत्रमा रुचि रहनुका साथै सुखद् परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन् । धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नुका साथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि केही समय व्यतीत हुने साताको राशिफल रहेको छ ।
वृश्चिक राशिः वृश्चिक राशिका लागि साता अर्थदायी रहनेछ । कर्मक्षेत्र उन्नत रहनेछ । नेतृत्व क्षमतामा वृद्धिका साथै कार्य प्राप्तिका योग देखिन्छन् । आर्थिक पक्ष यो साता मिश्रित फलदायी रहनेछ । मंगल र बुधवारको समय भने केही खर्चदायी रहनसक्ने देखिन्छ । सेयर व्यवसाय पनि तत् समयमा स्थिर रहनसक्नेछ । अन्य समय अर्थिक दृष्टिले सुखद् रहनेछ । विद्याको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ । प्राविधिक विषयक्षेत्रको अध्ययन गर्नेका निम्ति सुखद् रहने देखिन्छ । पारिवारिक पक्ष सुखद् रहनेछ । इष्टजनको साथ सहयोग मिल्नुका साथै सन्ततिबाट पनि लाभ रहनेछ । कृषि कर्मीका निम्ति अन्नबालीका साथै पशु चौपायको व्यवसाय फलप्रद रहनेछ । कला साहित्य एवं सृजनाको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ । राजनीतबाट पनि लाभका योग देखिन्छन् । जलीय वस्तुबाट लाभ रहनुका साथै शेयर लगानी पनि प्रतिफलदायी बन्ने देखिन्छ । पे्रम प्रणका दृष्टिले साता सुखद् रहनेछ । दाम्पत्य सुखका योग रहेका छन् । खेलकर्मीका निम्ति साता मध्यमफलदायी रहनेछ । स्वास्थ्यका दृष्टिले मंगल र बुधवारको समय कष्टदायी रहनसक्ने साताको राशिफल रहेको छ ।
धनु राशिः धनु राशिका लागि यो साता उन्नतिकारक रहनेछ । कर्मक्षेत्र– सबल देखिन्छ । कार्य लाभका साथै पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धिका योग देखिन्छन् । मित्र पक्ष सबल रहनेछन् । आर्थिक दृष्टिले साता सफल रहनेछ । भौतिक वस्तु लाभदायी रहनेछन् । कृषिकर्मीका निम्ति फलफूल एवं दुग्धजन्य वस्तुबाट लाभ रहनेछ । सेयर व्यवसाय सुखद् नै देखिन्छ । बैंकिङ एवं बीमा क्षेत्रको लगानी प्रतिफलदायी रहने देखिन्छ । विद्याको क्षेत्र– सफल रहनेछ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ । कला साहित्य एवं संगीतको पक्ष पनि उन्नतदेखिन्छ । वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन् । पारिवारिक दृष्टिले साता सुखद् देखिन्छ । प्रेम पक्ष उन्नत रहनेछ । सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछ । अध्यात्मिचिन्तनका साथै सुखद् परिभ्रमणका अवसर पनि मिल्नेछन् । राजनीति एवं खेलेको क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ । बिहीवारपछिका समय केही कार्यदायी रहनसक्ने देखिन्छ । ग्रह बल कमजोर रहने भएकाले तत् समयमा लेनदेनका साथै खानपिनमा सजग रहनु नै उचित हुने साताको राशिफल रहेको छ ।
मकर राशिः मकर राशिका लागि साता लाभदायी रहनेछ । लग्न सबल देखिन्छ । प्राविधिक कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्न्े देखिन्छ । सोचेका काम पूरा हुनेछन् । नयाँ कार्यमा मन अग्रसर रहनुका साथै व्यवसायमा पनि वृद्धिका योग देखिन्छन् । सामाजिक कार्यम अग्रसरता बढ्नेछ । नेतृत्व क्षमतामा वृद्धिका साथै भौतिक वस्तुबाट लाभ रहने देखिन्छ । आर्थिक दृष्टिले साता उन्नतिदायी रहनेछ । लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन् । सेयर लागनी प्रतिफलदायी बन्ने देखिन्छ । विद्याको क्षेत्र सफल रहनेछ । कला, साहित्यको क्षेत्र सुखद् बन्ने देखिन्छ । शोध अनुसन्धानका कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ । प्रेम प्रणका दृष्टिले साता लाभदायी रहनेछ । आत्मीय दूरी घट्नेछ । दाम्पत्य सुखका योग पनि रहेका छन् । सांगीतिक क्षेत्र अर्थदायी रहनुका साथै सुखद् यात्राका योग पनि देखिन्छन् । शत्रु पक्ष दुर्वल रहनेछन् । वैदेशिक क्षेत्र सुखमय रहनेछ । कार्य प्राप्तिका साथै सुखद् परिभ्रमणका अवसर प्राप्त हुनेछन् । स्वास्थ्यको भाव सबल देखिन्छ । खेल क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन् । वाणिज्यको क्षेत्र पनि उन्नत रहने साताको राशिफल रहेको छ ।
कुम्भ राशिः कुम्भ राशिका लागि साता मिश्रित फलदायी रहनेछ । कार्यक्षेत्रमा संघर्ष गर्नुपरे पनि उचित प्रतिफल प्राप्त हुने देखिन्छ । नयाँ कार्य प्राप्तिका योग देखिन्छन् । आर्थिक दृष्टिले साता सुखद् नै रहनेछ । धातुजन्य वस्तुबाट लाभका योग देखिन्छन् । सेयर व्यवसायमा वृद्धिका सूचक देखापर्नेछन् । सोमवारसम्मको समय भने खर्चिलो रहानसक्नेछ । पारिवारिक साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ । राजनीति एवं खेलको क्षेत्र यो साता सुखद् देखिन्छ । विद्याको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ । प्राविधिक क्षेत्रकाके अध्ययन गर्नेका निम्त साता सुखद् रहनेछ । वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन् । सोमवारसम्म चन्द्रमा प्रतिकूल रहनसक्नेछन् । जसले कार्यक्षेत्रमा संघर्षका साथै खर्चमा पनि वृद्धि गराउनसक्ने देखिन्छ । तत् समयमा विशेष निर्णयका कार्यमा अघि नबढ्नु नै उचित हुनेछ । यसैगरी तत् समयमा स्वास्थ्यमा पनि सजग रहनु नै लाभप्रद देखिन्छ ।
मीन राशि : मीन राशिका लागि साता फलदायी रहनेछ । कार्म क्षेत्र सबल रहनेछ । नेतृत्व क्षमतामा वृद्धिका साथै प्रशासनिक पक्ष पनि सबल रहनेछ । सामाजिक कार्यमा अधिक संलग्नता रहने देखिन्छ । आर्थिक पक्ष उन्नत रहनेछ । लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन् । पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथै सुखद् यात्राका योग पनि देखिन्छन् । विद्याको भाव फलदायी रहनेछ । वाणिज्य क्षेत्रको अध्ययन कर्ताका निम्त साता सुखद् रहनेछ । कला साहित्य एवं संगीतको पक्ष उन्नत नै देखिन्छ । पारिवारिक सुखका योग देखिन्छ । सन्ततिबाट सुख मिल्नेछ । धार्मिक कार्यमा पनि संलग्ता रहनुका साथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहने देखिन्छ । रवैदेशि क्षेत्र लाभप्रद न ैरहनेछ । मंगल र बुधवारको समय भने कार्यदायी रहनसक्ने देखिन्छ । तत् समयमा ग्रहजन्य बल कमजोर रहने भएकाले सवस्थ्यमा सजग रहनु नै उचित हुनेछ । यसैगरी तत् समयमा लेनदेनका कार्यमा बुद्धिपक्षको प्रयोग शुभ फलदायी रहने साताको राशिफल रहेको छ ।
प्रकाशित समय ०५:४२ बजे
पछिल्लाे - विनाकाम सवारीसाधन कुदाए ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने
अघिल्लाे - मध्यरात प्रतिनिधिसभा विघटन, नयाँ चुनाव कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते